???တိမ်ပင်လယ်ပေါ်က အေးမြတဲ့ တောင်ပေါ်မြို့လေးသံတောင်ဆီ? | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Travel » ???တိမ်ပင်လယ်ပေါ်က အေးမြတဲ့ တောင်ပေါ်မြို့လေးသံတောင်ဆီ?
???တိမ်ပင်လယ်ပေါ်က အေးမြတဲ့ တောင်ပေါ်မြို့လေးသံတောင်ဆီ?
Posted by Shar Thet Man on Dec 27, 2016 in Travel |2comments
⛅ ☁ ⛅ ☁ ⛅ ☁“တိမ်တွေနေတဲ့အရပ်ဆီကိုနင်နဲ့ငါ “ ⛅ ☁ ⛅ ☁ ⛅ ☁
? ? ?“လေတွေတိုက်တုန်းသွားမယ်ကွာဖက်ထားပါ “ ? ? ?
? ? ?“တုန်ရီနေတဲ့ငါ့လက်ကလေးကိုနင်ကိုင်ထားပါ” ? ? ?
? ? ?“ရင်ခုန်လွန်းလို့ပါ “ ? ?
#မြတ်စောညီနောင်ဘုရား ( တောင်ငူ ) ??
#ပသီချောင်း ? ?
ညနေ (၁ – ၂ – ၃ – ၅ – ၆ – ၇ – ၉ခွဲ)တွေပါ။ စေတမန် – ၅၅၀၀ ကျပ်/ မိုးကောင်းကင် – ၁၃၃၀၀ ကျပ်/ရွှေမန်းသူ – ၅၂၀၀ ကျပ်တို့ ရှိပါတယ်။(မွန်လေးဆီမှာဝယ်လို့ရပါတယ်လို့ ??)
? ? ?ကမ္ဘာကျော်တေးရေးဆရာတွေရဲ့သံစဉ်တွေရှုံးလောက်တဲ့သဘာဝတောင်ကျချောင်းလေးဖြစ်တဲ့ပသီချောင်းလေးမှာ
မြို့ပေါ်ဘုရားဖြစ်တဲ့ ရွှေဆံတော် ဘုရားကိုသွားရောက်ဖူးမျှော်ခဲ့တယ် ?? ?? တောင်ငူမြို့ရဲ့ ကျက်သရေဆောင်ဘုရား